China Juda kiln - usoro mmepụta 100 / ụbọchị mmepụta -EPC ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị nrụpụta | Juda
Jude kiln - 100 tọn / usoro mmepụta ụbọchị -EPC oru ngo
Wayo bụ isi na isi inyeaka ihe maka ígwè mmepụta, calcium carbide mmepụta, refractory mmepụta, alumina mmepụta. Karịsịa na oge ọhụrụ, teknụzụ ọhụrụ, ngwaahịa ọhụrụ na-aga n'ihu na-azụlite ihe ndị calcium na-ejikọkarị ...
I. Mkpa nke Na-emepe emepe New Modern Wayo n'ekwú Technology
Wayo bụ isi na isi inyeaka ihe maka ígwè mmepụta, calcium carbide mmepụta, refractory mmepụta, alumina mmepụta. Karịsịa na oge ọhụrụ, teknụzụ ọhụrụ, ngwaahịa ọhụrụ na-aga n'ihu na-azụlite ihe ndị calcium na-ejikwa ya eme ihe. Omume egosila na teknụzụ teknụzụ nke oge a bụ ezigbo ụzọ na ụzọ mkpụmkpụ na-erite uru na-enwu gbaa maka ígwè na ụlọ ọrụ nchara, ụlọ ọrụ calcium carbide, ụlọ ọrụ coking na ihe ndị ọzọ. Ka ọ dị ugbu a, uru otu tọn lime gafere karịa uru nke tọn nchara, tọn iron, tọn calcium carbide, tọn coke. Ulo oru ndi tinyegoro teknụzụ nke lime a na-enweta elele nwere nnukwu elele ma nweta nnukwu uru mmekọrịta mmadụ na ibe ha. Agbanyeghị, ọtụtụ ụlọ ọrụ amachibidoro site na njikwa njikwa ọdịnala na njikwa njikwa ma mebeghi teknụzụ teknụzụ lime nke oge a ka na-adabere na mmepụta lime lime. Yabụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchịkwa mmetọ nke okpu ala, anyị ga-atụkwasịkwa obi na mmejuputa ọkụ nke lime nke oge a iji dozie nsogbu nke ọchịchọ.
Ihe a na-akpọ teknụzụ ọhụụ a na-akpọ lime bụ sọsọmọnụ ndị ọzọ na-enye usoro lime na nchekwa gburugburu ebe obibi, ọrụ nchekwa ike, igwe na akpaaka. Ebe ọ bụ na usoro a na-anabata teknụzụ ọkụ nke oge a, ọ nwere ike iji ike mee ihe n'ụzọ zuru oke, ọkachasị gas na-emetọ gburugburu ebe obibi dị ka isi iyi ike ma mee ka ihe mkpofu ghọọ akụ. Nke a abụghị naanị ichebe gburugburu ebe obibi, kamakwa ọ na-amịpụta ezigbo mma yana wayo dị ọnụ ala. Uru ya na uru ya, uru akụ na ụba na mmekọrịta ọha na eze dị oke mkpa. Nke a bụ mkpa popularizing teknụzụ ọhụụ wayo.
2. technologydị nke teknụzụ a na-arụ n’okwukwe wayo
Enwere mmanụ ọkụ a gwara agwa, ya bụ, mmanụ siri ike, coke, ntụ ntụ, kol na gas. Gas n'ekwú ọkụ na-agụnye gbawara ọkụ gas, coke oven gas, calcium carbide ọdụ gas, oku gas, eke gas na na. Dị ka ọdịdị nke kiln ahụ si dị, e nwere ọkụ ọkụ, rotary kiln, sleeve kiln, Vimast kiln (West Germany), Melz kiln (Switzerland), Fucas kiln ()tali) na ihe ndị ọzọ. N'otu oge, enwere ezigbo nrụgide na-arụ ọrụ na ọkụ na nrụgide nrụgide na-arụ ọrụ. Ngwongwo a na-agwakọta nke nwere 800 cubic mita kwa ụbọchị na-emepụta n'okpuru 500 na ọkụ ọkụ nke oge a na mita 250 cubic, karịsịa nchekwa ọkụ na nchekwa gburugburu ebe obibi na ọkụ ọkụ ọkụ na gas gas na-ere ọkụ, ka e mepụtara ma hazie. Nzube na imepụta “lime kiln long flain burner” edozila nsogbu ọkụ nke nnukwu calorific uru na obere ire ọkụ nke coke oven gas, nke nwere ike iji gas coke fọdụrụ arụ ọrụ zuru oke. Site na coke oven mbụ “ọkụ”, na-emetọ gburugburu ebe obibi dị ka ike bara uru maka ụlọ ọrụ iji mepụta uru. N'ihi na obere na-ajụ-sized ígwè na ígwè ụlọ ọrụ, coking ụlọ ọrụ, calcium carbide ụlọ ọrụ, na refractory ụlọ ọrụ dị ezigbo mma ike ịzọpụta, gburugburu ebe obibi-echebe, arụmọrụ na ụzọ dị irè.
3.Tkpụrụ Isi NA usoro teknụzụ
Akụkụ nke ihe ndị na-eme ka limestone bụ calcium carbonate, ebe ihe na-eme ka nzu ha bụ calcium oxide. Principlekpụrụ bụ isi nke wayo na-ere ọkụ bụ iji ire ere calcium carbonate na nkume nzu n'ime ngwa ngwa nke calcium oxide na carbon dioxide site n'enyemaka nke okpomọkụ dị elu. Usoro mmeghachi omume ya bụ
Usoro ya bụ na a na-ebu limestone na mmanụ ọkụ ọkụ na ọkụ ọkụ lime (ma ọ bụrụ na a na-enye ọkpọkọ mmanụ gas na ndị na-ere ọkụ ọkụ) ma debe ya na ogo 850, na-echekwa na 1200 degrees, wee mee ka ọ dị jụụ ma budata ya. Usoro nhazi usoro ya zuru oke na nke a na-ebu n'ime akpa akara. Dị iche iche n'ekwú ọkụ shapes dị iche iche preheating, calcination, jụrụ na ash ebutu ụzọ. Otú ọ dị, ụfọdụ ụkpụrụ usoro bụ otu: calcination okpomọkụ bụ 850-1200 degrees, preheating temperature is 100——850 degrees. Ash okpomọkụ dị n'okpuru 100 ogo. Akụrụngwa mma dị elu, wayo mma dị mma; na mmanụ ụgbọala calorific uru dị elu, na ibu oriri bụ obere; limestone urughuru size bụ proportional na calcination oge; ihe omumu ihe ngosiputa nke di nfe bu nke kwesiri ka oge ichoro ya.
Nke gara aga: Ọnwụ Juda- 300 tọn / ụbọchị X4 Lime kilns na Luoyang, Henan Province-EPC project
Osote: Wayo Ime Production Line
Elu arụmọrụ nke akụrụngwa (1) Nrụpụta ihe kwa ụbọchị (ihe ruru 300 tọn kwa ụbọchị); (2) Ọrụ dị elu (ruo 260 ~ 320 ml); (3) Ọkụ dị ala (≤ 10 pasent;) (4) ablenọgide na-edozi calcium oxide (CaO≥90 pasent); (5) Mfe ọrụ na njikwa na ite ọkụ (enweghị mgbapụta, enweghị ntụgharị, enweghị cascade, enweghị ọkụ, mmezi nke kol na ọkụ); (6) Mbelata nke wayo nke ngwaahịa ahụ gwusiri mgbe ụlọ ọrụ jiri ya (pasent 30 maka ịkpụ igwe, imepụta ihe na s ...
Calcium hydroxide akụrụngwa, Calcium hydroxide Production Line akụrụngwa, Ime Calcium hydroxide, Calcium Hydroxide Ime, Calcium oxide na Calcium hydroxide, Aha Azụmaahịa nke Calcium Oxide,